BELO TSIRIBIHINA : Tra-tehaka ilay lehilahy mpamatsy ody gasy ireo dahalo
Ny alarobia 14 oktobra lasa teo, tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro, tra-tehaka tao amin’ny Kaominina Tsimafana, Distrikan’i Belo Tsiribihina ny lehilahy iray 45 taona voalaza ho mpamatsy ody gasy ireo dahalo sy mpanao ratsy any an-toerana. 16 octobre 2020
Io lehilahy io no mpiray tsikombakomba amin’ny dahalo ka manome ireo ody mialoha ny fanafihana. Tatitra avy amin’ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa ny 11 oktobra no tonga tao amin’ny Kaominina Tsimafana izy io ary nitondra ody gasy be dia be. Avy hatrany dia nandray ny andraikiny ireo olom-boafidy tao an-toerana, ka niantso ny Polisy mba hanokatra ny famotorana mahakasika ny raharaha.
Rehefa voasambotra ity farany dia fantatra nandritra izany fa avy any amin’ny Distrikan’i Mahabo izy ary efa malaza ratsy tamin’ny fanomezana ody gasy ireo dahalo ao amin’ny Distrikan’i Belo Tsiribihina mihitsy. Nandritra ny fisavana natao azy dia voaporofo tokoa satria nahitana ody marobe niaraka tamin’ny mohara ary tapa-kazo teny aminy. Nogiazana avokoa ireo rehetra ireo ankehitriny. Mbola mitohy ny famotorana lalina tanterahin’ny mpitandro filaminana aminy hatreto.